UVuyani Mtolo uzibona eyaphambili ngomculo we hip-hop | Eyethu News
Noon deadline looms for defiant Mugabe as Zimbabwe crisis deepens - 46 mins ago
Mugabe defies resignation expectations in TV speech – VIDEO - 48 mins ago
Bolt enlisted to improve “explosiveness” of Aussie running between the wickets - 51 mins ago
UVuyani Mtolo uzibona eyaphambili ngomculo we hip-hop
Ufuna ukwenza umculo wakhe KwaZulu Natal
UMCULI we hip-hop uVuyani Mtolo odabuka eMthuleni eduze kwase Mooiriver uzibona ephumelela kakhulu ngalomculo.
UMtolo omeninyaka engama-21 ubudala waqala eneminyaka eyi-16 ngonyaka ka-2005 ukwenza umculo. “Ngaleso sikhathi imina ngedwa engangenza umculo la ngiqhamuka khona, lokho okwenza abantu abaningi bangazi futhi bayithande into engangiyenza”, kuphawula uVuyani obebuye acule nasemicimbini yasesikoleni abefunda kusona eShea.Oconnor Combined School.
Lo mculi ozibiza ngo Daking bling usekhiphe ama albhamu amabili lapho khona azibhalela zonke izingoma zakhe ezikuwona lama albhamu. Waqale wenza idemo owayeyibiza nge Notties Legendary ngaphambi kokuba ephelelise i-albhamu yakhe yokuqala owayibiza ngokuthi iGenesis ngo 2012. IGenesis imayelana nemizwa yakhe, impilo aseyibonile naseyiphilile kanye nesiqalo sesizinto anazo, ingakho ayibiza ngokuthi iGenesis. Eyesibili yona ayikhiphe ngenyanga kaMarch kuwo lonyaka ibizwa nge Immortal. Lena yona ikhuluma ngebanga aselihambile kulendima yomculo ibuye ichaze nendlela akhula ngayo kulendima.
UDaking bling ocula lonke uhlobo lomculo we hip-hop uthi usehlomule okuningi ngomculo njengokuphumelela kwimincintiswano yemisakazo, kanye nokusiza abanye abaculi abafana naye ukuthi baziwe ngokuhlela imicimbi ye-hip-hop emiphakathini yase Howick. Kwimisakazo yeKZN capital efana no-Umgungundlovu 107.6Fm washaya bonke abaculi emakhanda kwizinhlelo zabo lapho kuqhudelana khona abaculi be hip-hop ngezingoma zabo. Uphinde waklonyeliswa ngesitifiketi kanye nezindondo zokuba umculi ovelele kanye neyokucula kahle esiteji.
Emva kwalemincintiswano wafonelwa inkampani yomculo yaseThekwini eyayifuna ukumfakela izingoma zakhe kwi nkampani yomculo yakwa Apple, iTunes. “Lenkampani ithembise ukuthi imali nokunye okuzotholakala ngezingoma zami kuzoza kumina”, kusho uDaking bling Usahlela nanokuya kwisiteshi sikamabonakude lapha kwaZulu-Natal, i1KZN TV ngenyanga ka November kumncintiswano wokugqudelana kwabaculi be hip-hop obizwa nge street vibe.
Kubaculi abukela kubona nabamuvusela ugqozi ubala uJub Jub, K.O, Kwesta, 2pac kanye no Black coffee. “Ngiyazi uJub Jub uke wavela kabi emphakathini kodwa ngiyayithanda indlela enza ngayo umculo kanti futhi uma kungenzeka ngingathanda ukusebenza naye”, kuchaza uDaking bling. Abanye babaculi athi angafisayo okusebenza nabo ubala uNasty C, Kwesta kanye naye uK.O.
UBacking Bling owakhuliswa umndeni wabamhlophe uthe kwakungekho lula kubona ukuzwa ukuthi uzimisele ngomculo we hip-hop njengoba ekhuliswe umndeni ongamaKhrestu futhi okholelwa ekutheni lomculo unodlame. Ekuhambeni kwesikhathi babona ukuthi uzimisele ngalomculo baqala bameseka. Uthe bese bemuphe ngisho imali yokugibela uma eyocula ezindaweni ezikude njengase Thekwini. “Abazali bami babona ukuthi ngiyawuthanda lomculo futhi ngenza kahle base bethi angeke bawulalele kodwa uma ngidinga usizo bazongixhasa”, kuchaza uDaking bling.
“Sengisebenzisane nabaculi abaningi balana eMgungundlovu kanye nabaseThekwini abafana no Chillie bite wefilimu iZulu lami, MC killer, Silent Killer kanye nabanye beqembu le 033.” Uphinde wasebenzisana nabaculi baphesheya omunye wabo ongowase England uOnur, obemenzela isigqi sezingoma zakhe mahhala. Omunye ongamdalulanga igama wezwa iculo lakhe ngonyaka ophelile kwi website yomculo ebizwa ngeHoxpox lapho iculo lakhe lathengwa abantu abawu 12630 ku-intanethi. Emveni kwalokho benza iculo ndawonye.
“Ngifisa ukwenza umculo wami la KwaZulu-Natal njengabaculi abangaphansi kwe Afrotainment-inkampani yomculo ephethwe Udj Tira, eThekwini. Abaculi abangaphansi kwalenkampani bayaliphakamisa igama lakulesisifundazwe,” kuphawula uDaking bling. Ubuye waphawula ngokubalule kakokuxhasana uma ningabaculi bangandawonye washo nokuthi engakujabulela ukusebenza nabaculi bakulesisifunda kakhulu.
UDaking bling usenze nevidiyo yengoma yakhe kanti futhi ngenyanga ezayo uzophinde enze enye eHowick yengoma ebizwa ngokuthi ihox box. Usasezinhlelweni nosomabhizinisi bendawo ukuthi bamxhase uma ehlela imicimbi emiphakathini kanye nangebhizinisi lokwenza amateki anegama lakhe kanye nezikibha.
Uma ufuna ukuxhumana naye ungamthola kwi website yakhe: www.king_bling7.webnode.com noma umthumelele i-email: [email protected] okanye umthinte ocingekweni kwinombolo yakhe ethi 074 8924 767. Uyatholakala naku Facebook kwi page lakhe elibizwa nge Daking blinG.